Google inosundira vashandisi veChromium kuchinjira kuChannel | Linux Vakapindwa muropa
Google inosundira vashandisi veChromium, injini inoshandiswa zvakanyanya, kuchinjira kuChrome
Iyo inonyanya kushandiswa webhu bhurawuza pasirese Chrome, yakagadzirwa na Google. Kana tikataura nezveinjini yayo, zvinhu zvinoramba zvichiita nani, nekuti Chromium ndiyo inofambisa vamwe senge Opera, Vivaldi kana shinga, saka chikamu chekambani cheAlfabheti chinofanira kugutsikana. Asi hazvisi, kana kuti saka tinogona kufunga mushure mekufamba kwazvino kwakaitwa nekambani yeinjini yekutsvaga yakakurumbira uye yakakwenenzverwa neanogadzira anoshanda pamwe naFedora.
Sezvo isu tichigona kuverenga mukati iyi tambo ye twitter, Google yakazivisa kuti haichazotsigira kutsigirana uye mamwe ma "Google akasarudzika" APIs. Izvi zvichakonzera mamwe mabhurawuza, akadai seChromium ayo anosanganisira kumwe kugoverwa senge Fedora, kuita kushomeka mune izvo, pachezvangu, zvinoita kunge isiri imwe yenzira dzakanakisa idzo Google yaigona kuita uye ndinofunga zvakaitwa nekutenda kwakaipa.
Google ichaita kuti mamwe mabhurawuza asanyanya kushanda
Google yakazivisa kuti iri kucheka mukana weSync uye "mamwe maGoogle akasarudzika APIs" kubva kune ese anovaka kunze kweGoogle Chrome. Izvi zvichaita kuti Chromium ivakwe yeFedora isinganyanyo shanda (pamwe chete nezvimwe zvese zvakapakurwa zvakagoverwa zveChromium). Zvinonzwisisika, Google _ yakapa_ ivo vanogadzira iyo Chromium yekuparadzira mapakeji aya ekuwana kodzero muna 2013 kuburikidza nemakiyi eAPI, kunyanya kuitira kuti tikwanise kuvhura sosi yekuvaka yeChromium ine (inenge) inoratidzira parity neChannel. Kufunga kwakapihwa shanduko iyi? Google haidi kuti vashandisi vakwanise "kuwana yavo data reChrome Sync (senge mabhukumaki) ... ine isiri-Google browser, zvichibva paChromium." Ivo havasi kuvhara gomba rekuchengetedza, ivo vanongoda kuti munhu wese ashandise Chrome.
Kufanana neni, Callaway akajeka nezvazvo, uye anodaro saizvozvo pakupera kwekutora. Kwete kuti ivo vari kuita chero chinhu kune chengetedzo yeduPane kudaro, chinangwa cheGoogle ndechekuti munhu wese ashandise bhurawuza ravanodzora 100%.
Chii chichaitika mune ramangwana hachizivikanwe, asi Callaway anokahadzika kuti ingave sarudzo yakanaka yekupa Chromium muFedora kana ikatemwa, uye inoudza kambani iyi kuti Sundar Photayi anomhanya kuti kuchine nguva yekugadzirisa danho rekumanikidza. Mamwe mabhurawuza akavakirwa pa chromium Ivo vanoshandisa yavo yega syncing system, saka kusakwanisa kuyananisa mapassword uye mabhukumaki kwaisazove chinhu chikuru, asi handizvo neChromium. Izvo zvichave zvakare zvakafanira kuti uone kana zvichikwanisika kudzoreredza kuwiriranisa pamwe nekumwe kuwedzerwa kweramangwana kana kana vachimanikidza kuwiriranisa zvese nemawoko, kuwedzera kune izvo zvinoramba zvichionekwa pamwe nezvimwe zvinocheka zvinotishamisa.
Parizvino, ndiri kufara kushandisa Firefox, kunyange ndichivimba kuti kambani inodzokera kumashure.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google inosundira vashandisi veChromium, injini inoshandiswa zvakanyanya, kuchinjira kuChrome
Zvakanaka, ipa x iro ziso kuChannel ... uye google, uye rega kuunganidza yakawanda kwazvo data yemushandisi ... ..
AOSP haina kusanganisira masevhisi eGoogle, saka zvinoita sekunge iwo akafanana neyakavhurwa sosi yeGoogle.
Pindura kuna ClavoUnClavito
heino mukana weavo vanhu vanofunga kuti "vabiridzi" uye vanorota kuvaka yavo yavo GNU "distro", sekunge sekunge vanoda mamwe ma distros, kune akawanda maapplication e linux asi iwo anofanira kuvandudzwa kana kuvandudzwa asi kwete kupenga senge iyo "kuutio" kunofinha uye kusabatsira izvo panguva iyoyo zvakatsanangurwa se «chishamiso» che «yakavhurwa sosi» mainjiniya
USA Uye Google iri kutsvaga izvo zvichave zviri mune isiri kure ramangwana kuberekwa kweiyo nyowani yekushandisa sisitimu yakagadzirwa neHuawei kana imwe kambani yeChinese ichaita makwikwi anotyisa kumakambani ese eAmerica, zvinokwanisika kuti isu tinokunda vese vashandisi sekureba sekuremekedza zvinhu zvine chekuita nekuchengetedzwa kwedata.
Valheim: inotangisa Kukadzi 2 yeLinux